Eksaody 18 - Ny Baiboly
1Ren'i Jetrao, mpisorona ao Madiana, rafozan'i Moizy, ny soa rehetra nataon'Andriamanitra tamin'i Moizy sy Israely vahoakany, ny namoahan'ny Tompo an'Israely tany Ejipta. 2Nentin'i Jetrao rafozan'i Moizy, Seforà, vadin'i Moizy, izay efa nampodiny, 3mbamin'ny zanak'i Seforà roa lahy; ny iray natao hoe: Gersama; fa hoy Moizy: vahiny aty an-tany hafa aho, 4ary ny iray natao hoe: Eliezera, fa hoy izy: Novonjen'ny Andriamanitry ny raiko aho, fa nafahany tamin'ny sabatr'i Faraona. 5Jetrao rafozan'i Moizy niaraka tamin'ny zanak'i Moizy sy ny vadiny, dia tonga nanatona azy tany an'efitra nitobiany, tany an-tendrombohitr'Andriamanitra; 6ka nampilaza tamin'i Moizy hoe: Tonga aty aminao aho, izaho Jetrao rafozanao mbamin'ny vadiano sy ny zanany roalahy miaraka aminy.
27Nanao veloma ny rafozany Moizy, dia lasa nody any amin'ny taniny Jetrao. >